Su&#39;aalaha inta badan la isweydiiyo | BGA
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo Machadka Cagaaran Boston
Waqtiguu Iskuulku bilaabanayaa?
Saacadaha iskuulka waa 8-da - 3-da-maalin kasta marka laga reebo Arbacada, marka ardayda oo dhan laga ceyriyo 12-ka galabnimo. Fasalladu si dhakhso ah ayey u bilowdaan 8 subaxnimo
Goormaa ayuu ardaygaygu imaan karaa oo loo heli karaa marinka dhismaha?
Basaska iskuulku waxay yimaadaan BGA markay tahay 7:15 am. Ardayda waxaa lagu soo dhaweynayaa inay kaqaybqaataan barnaamijka “shimbiraha hore” ee bilaashka ah wakhtigaas, si ay u helaan quraac iyo kormeer. Dhammaan ardayda ku jira barnaamijka shimbiraha hore waa inay joogaan maqaayadda ilaa fasallada ay ka bilaaban doonaan.
Sideen ula socon karaa fasalada / horumarka cunugeyga fasalka gudahiisa?
Markuu dugsigu billowdo bisha Sebtembar waxaad heli doontaa barnaamijkayaga 'JUPITER' halkaas oo aad iska qori karto oo aad ka arki karto sida ay buundooyinkoodu u horumarinayaan.
Sideen u habeyn karaa la kulanka ilmahayga macalinkiisa (yaasha) haddii aan walaac qabo?
Arday kasta waxaa loo xilsaarayaa la-taliye isaga / iyada ayaa kaa caawin doonta inaad abaabusho kulammada macallimiinta.
Labisku miyey khasab yihiin iskuulku inuu balaaran yahay?
Dhamaan ardayda dugsiga dhexe waxaa laga rabaa inay xidhaan labis maalin kasta. Nidaamkayaga labbiska wuxuu gacan ka geysanayaa dhisidda isku xirnaan, koox mideysan oo ujeeddadiisu tahay yareynta walaaca ardayga iyo qoyska markii la go'aaminayo waxa ku habboon dugsiga. Waxaan haysan doonnaa labisyo marmar ah oo ay ardaydu si xor ah iyo si ku habboon wax u sheegi karaan. Fadlan tixraac Buug-gacmeedka Buugga Ardayga iyo Qoyska si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Aaway ardayda dugsiga sare?
BGA waa iskuul dhan 6-12 oo buuxa. Ardayda dugsiga sare iyo dugsiga dhexe waxay wada galaan dhismaha si wada jir ah albaabka hore laakiin fasallo ayey ku qaataan dhinacyada kala duwan ee dhismaha. Waxay kale oo leeyihiin taariikho kulumo gooni ah iyo jadwalka gambaleelka fasalka.
Ma jiraan wax fasax ah?
Haa! Dhammaan ardayda dugsiga dhexe waxay helaan toddobaadyo nasasho / dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaq. Jawiga xun waxaa jira fasax gudaha ah.
Waa maxay nooca taageerada MCAS ee ay BGA bixiso?
Waxaan ku faraxsanahay in aan iskaashi la sameyno Sanadka Magaalada oo bixiya waxbarida 'MCAS' ka ah qaabab kale ee taageerooyin waxbarasho iyo bulsho.
Ardayda BGA ma u heli karaan marin barnaamij barnaamij dugsi kadib?
Haa! Wada-hawlgalayaasha BGA oo la shaqeeya West End Boys iyo Gabdhaha naadiga ee Brighton, oo socod gaaban dugsiga ka socda. Qiimo aad u yar sanadkii, ardaygaaga ayaa heli doona casho, caawinaad shaqo guri iyo xulasho nashaadaad xiiso leh oo la sameeyo. Waxaad kala xiriiri kartaa 617-787-4044 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Halkan guji tilmaamaha si aad uhesho BGA
Kala xiriir Dre Woodberry, Isuduwaha Diiwaangelinta, taleefanka (857) 891-1742 ama dwoodberry@bostongreenacademy.org .